Gbasara anyị - ebube ụlọ ọrụ Co., Ltd.
Wonderful enterprise Co., Ltd. nọ na-ebugharị mmụọ nke ọrụ aka. Ọ nọ na-arụsi ọrụ ike na ngalaba nkewa a ọtụtụ afọ. O guzobere ọtụtụ ọwa ngwaahịa nke mmepụta, ọkọnọ, na ahịa, ma nwee ahịa siri ike na ngwaahịa ndị nwere onwe ya na R & D. Ulo oru ndi isi ulo oru a bu "Ishine" na "neon glo", ndi nwere aha oma na ahia Europe na America ma nwere oke ahia. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mkpokọta, ụlọ ọrụ nwere nwere fọrọ nke nta 20 nchọpụta Kemịkalụ na bara uru ọhụrụ shapes na anya na China na United States; ọ mepụtawo ọtụtụ ngwaahịa na-egbukepụ egbukepụ na ọtụtụ akara ngwaahịa maka ndị ahịa n'ụwa niile.
Wonderful enterprise Co., Ltd. nwere ụlọ ọrụ nke ya, nke e guzobere na 2006. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ahụ nwere usoro njikwa njikwa zuru oke na sayensị, mana nwekwara ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke onwe ya yana akụrụngwa nrụpụta dị elu. The factory nwere ihe karịrị 4000 square mita nke ọkọlọtọ mmepụta ohere, ya R & D na mmepụta otu, 7 mmepụta edoghi, na ihe karịrị 100 ọrụ. Ọ gafere mba ISO 9001 mma management usoro asambodo na factory nnyocha nke ICTI, BSCI, na WCA iru eru asambodo. ọ tọrọ ntọala siri ike na nkwa maka OEM na ODM mmezi mmemme nke ndị ahịa n'ụwa niile. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ afọ nke azụmahịa imekọ ihe ọnụ na ụwa na-ama ụlọ ọrụ, gụnyere Disney, Coco-Cola, Walmart, dollar osisi, CVS, Auchan Auchan, Carrefour, wdg
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịmepụta obi ụtọ, kpọlite ​​ndị ọrụ, na ịkwụghachi ọha mmadụ. Na ngwaahịa anyị dị elu, ọrụ dị mma, na uru ọnụahịa na-ewetara ndị ọrụ niile ọ joyụ!
Companylọ ọrụ ahụ abụghị naanị onye na-eweta ngwaahịa dị mma ma dị elu kamakwa ọ bụ onye na-ebupụ ahịa na-enwu enwu. Ngwaahịa anyị ndị na-enwu gbaa nwere ike ịghọ ezigbo ndị mmekọ nke ndị ọzọ, ma mepụta ọmarịcha na obi ụtọ ikuku ka ndị mmadụ wee nwee ike icheta ụdị obi ụtọ ahụ n'oge ọ bụla dị mkpa yana ụzọ ndụ!